ကုန်းအဆင်းတွေ မှာ ကားဘရိတ်မှေးပီး ဆင်းသင့်ပါသလား…?….အဖြေကတော့…. – Nyi Ma Lay
ကုန်းအဆင်းတွေ မှာ ကားဘရိတ်မှေးပီး ဆင်းသင့်ပါသလား…?….အဖြေကတော့….
ကားမော င်းနှင်တဲ့အခါ ကား အဆင်းတွေမှာ တော်ေ တာ်များ များက ဘရိတ်ကို အချိန်အြ ကာကြီးမှေးပြီးဆင်း ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုမှေး ဆင်းရင် ကားဘရိတ်ေ ပါက်ပြီး ကားေ ချာက်ထဲထိုး ကျတာတွေကို စိတ်မကောင်း စွာနဲ့ ကြားေ နရပါတယ်။
ကားဘရိ တ်ပေါ က်တယ်ဆိုတာက ဖြစ်တောင့်ဖြ စ်ခဲကိစ္စပါ။ ကုန်းအဆင်းတွေမှာ လိုအပ်ပါက ဘရိတ်မှေးသ င့်ရင် မှေးလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်အကြာကြီး ဘရိတ်မှေးပြီး ကုန်းဆင်း တာကတော့ တော်တော်လေး အန္တရာယ် များပါတယ်။
တကယ်ဆိုရင် ကုန်းအဆင်းတွေမှာ ဂီယာကြီးတွေဖြစ်တဲ့ နံပါတ် ၁၊ နံပါတ် ၂၊ နံပါတ် ၃ ဂီယာတွေနဲ့ ဆင်းလို့ ရပါတယ်။ အော်တိုဂီယာမှာဆိုရင်လည်း 1, 2, 3, B, S (သို့) L နဲ့ ဆင်းလို့ရ ပါတယ်။
ဂီယာကြီးနဲ့ ဆင်းတဲ့ အတွက် ဘရိတ်လည်းေ မှးစရာမ လိုပါဘူး။ ဘရိတ်ကို ကြာရှည်စွာ မှေးထားပါက ဘရိတ်ရူး (Brake Shoe) တွေ၊ ဘရိတ်ပတ် (Brake Pad) တွေ ပိုစားတဲ့အပြင် ဘရိတ်လ ည်းပူပါတယ်။
ဘရိတ်ပူတဲ့အခါ ဘရိတ်ရှောခြင်း၊ ဘရိတ်ပျော က်ခြင်းတွေဖြစ်ကာ ဘရိတ်မမိတော့ဘဲ ဘရိတ်ေ ပါက်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ အကယ်၍ ကုန်းအဆင်းမှာ ခြေနင်းဘရိတ်ပျော့ပြီး ဘရိတ်ပျော က်သလိုဖြစ်သွားခဲ့ရင် ဂီယာကြီးတွေနဲ့ ထိန်းဆင်းပြီး ရပ်နားလို့ရ တဲ့နေရာမှာ 45 ~ 60 မိနစ်ခန့် ရပ်နားပေးပါက ဘရိတ်ရဲ့ အပူချိန်ကျသွားပြီး ဘရိတ်ပြန်မိပါလိမ့်မယ်။
ကားေမာ င္းႏွင္တဲ့အခါ ကား အဆင္းေတြမွာ ေတာ္ေ တာ္မ်ား မ်ားက ဘရိတ္ကို အခ်ိန္အၾ ကာႀကီးေမွးၿပီးဆင္း ၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီလိုေမွး ဆင္းရင္ ကားဘရိတ္ေ ပါက္ၿပီး ကားေ ခ်ာက္ထဲထိုး က်တာေတြကို စိတ္မေကာင္း စြာနဲ႕ ၾကားေ နရပါတယ္။
ကားဘရိ တ္ေပါ က္တယ္ဆိုတာက ျဖစ္ေတာင့္ျဖ စ္ခဲကိစၥပါ။ ကုန္းအဆင္းေတြမွာ လိုအပ္ပါက ဘရိတ္ေမွးသ င့္ရင္ ေမွးလို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခ်ိန္အၾကာႀကီး ဘရိတ္ေမွးၿပီး ကုန္းဆင္း တာကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး အႏၲရာယ္ မ်ားပါတယ္။
တကယ္ဆိုရင္ ကုန္းအဆင္းေတြမွာ ဂီယာႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ နံပါတ္ ၁၊ နံပါတ္ ၂၊ နံပါတ္ ၃ ဂီယာေတြနဲ႕ ဆင္းလို႔ ရပါတယ္။ ေအာ္တိုဂီယာမွာဆိုရင္လည္း 1, 2, 3, B, S (သို႔) L နဲ႕ ဆင္းလို႔ရ ပါတယ္။
ဂီယာႀကီးနဲ႕ ဆင္းတဲ့ အတြက္ ဘရိတ္လည္းေ မွးစရာမ လိုပါဘူး။ ဘရိတ္ကို ၾကာရွည္စြာ ေမွးထားပါက ဘရိတ္႐ူး (Brake Shoe) ေတြ၊ ဘရိတ္ပတ္ (Brake Pad) ေတြ ပိုစားတဲ့အျပင္ ဘရိတ္လ ည္းပူပါတယ္။
ဘရိတ္ပူတဲ့အခါ ဘရိတ္ေရွာျခင္း၊ ဘရိတ္ေပ်ာ က္ျခင္းေတြျဖစ္ကာ ဘရိတ္မမိေတာ့ဘဲ ဘရိတ္ေ ပါက္ျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ အကယ္၍ ကုန္းအဆင္းမွာ ေျခနင္းဘရိတ္ေပ်ာ့ၿပီး ဘရိတ္ေပ်ာ က္သလိုျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ဂီယာႀကီးေတြနဲ႕ ထိန္းဆင္းၿပီး ရပ္နားလို႔ရ တဲ့ေနရာမွာ 45 ~ 60 မိနစ္ခန့္ ရပ္နားေပးပါက ဘရိတ္ရဲ႕ အပူခ်ိန္က်သြားၿပီး ဘရိတ္ျပန္မိပါလိမ့္မယ္။
Previous post လူမျိုး ဘာသာမရွေး ကြီးကြီးငယ်ငယ် အကုန်လုံး ကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ ရေခဲမုန့် ကို အိမ်မှာပဲ အလွယ်တစ်ကူပြုလုပ်နည်းလေး
Next post သူတို့လေးတွေလည်း အသားစားချင်ရှာမှာပေါ….ငတ်လို့သာ အရိုးကြွေးလည်း စားကြရတာပါဗျာ